Global Voices teny Malagasy · 23 Desambra 2017
23 Desambra 2017
Tantara tamin'ny 23 Desambra 2017
Rivopanovàna ao Nepal: Fifandonana
Azia Atsimo23 Desambra 2017
The king is nowhere close to seeing the light.
Ganà: Ny Ivontoerana Kofi Annan ho an'ny Fahombiazana Amin'ny ICT
Ghana23 Desambra 2017
Ny alakamisy maraina teo, natomboko tamin'ny fitsidihana samirery ny Ivontoerana Kofi Annan ho an'ny Fahombiazana amin'ny ICT [TIC amin'ny teny Frantsay: Teknolojian'ny Fampitambaovao sy ny Fifandraisana], ivontoeram-piofanana manaraka ny teknolojia avolenta natsangan'ny fitondran'i Inde sy Ganà, ny tontolo androko.
Afrika Mainty23 Desambra 2017
Mediam-bahoaka23 Desambra 2017
Roapolo tamin'ireo nivory tao Colombo, Sri Lanka izahay izay samy nampiasa ny fiteny mifangaro samihafa, ny fomba fijery ara-kolotsaina, ny asa isankarazany, ary ny zavatra iraisana dia ny maha Global Voices anay.
Lahatsary Ho An'ny Fanovana [‘Video for Change’]: Fitantarana Momba Ny Vondrom-piarahamonina, Fitaovan'ny Fifaharana
Tambajotran'ny fikambanana izay mampiasa lahatsary ho toy ny fitaovana ho an'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ny Video4Change mba hilazana ny tantaran'izy ireo manokana momba ny fanoherana.
Amerika Latina23 Desambra 2017
Nandefa ity sary ity "Fly, Hummingbird Fly" (Manidina ry Colibri, Manidina) i Gregory Smith, mpanorina ny Orina Mpanasoa ho an'ny Ankizy Tandindonin-doza, mba hanampiana amin'ny fanadihadiana ny tetikasa fanentanana farany indrindra nataon'ny fikambanana.
Tsunami: Tamberin'ny Bilaogy Maleziana Herintaona Taty Aoriana (2005)
Azia Atsinanana23 Desambra 2017
Ho fahatsiarovana ny Tsunami izay natao tao Pasifika Azia tamin'ny taona 2004, nametraka lahatsoratra fanomezam-boninahitra ny fotoana ireo bilaogera manerana izao tontolo izao.